CNC Tube Machine Ny Fanaovana Kofehy - Bobo Machine Co., Ltd.
CNC Tube Machine Ny Fanaovana Kofehy
Ny CNC Tube kofehy farany milina no ampiasaina mba hampihenana ny haben'ny savaivony Tube farany amin'ny alalan'ny fivezivezena mamorona sy mandeha ho azy Rolling dingana amin'ny sakafo, kofehy sy mampidina entana avy ny asa.
Configuration Ary Feature
1.1 Ny tena endriny dia ahitana amin'i X Y Linear lalamby sy ny baolina rafitra fiara nitondra visy, clamping rafitra, mandeha ho azy sy ny mampidina entana avy Loading rafitra, hydraulic rafitra, pneumatic rafitra, lubrication rafitra sy ny rafitra fanaraha-maso ny herinaratra
1.2 Fitaovana amin'ny fitahirizana Hopper ny fahaizana 50 pcs (Φ32MG). Ny Loading sy ny dingana mampidina entana avy no entin'ny pneumatic varingarina amin'ny miovaova sady mandimandina asa.
1.3 Ny rafitra clamping Tube mandany hafainganam-pandeha avo lavaka Rotary karazana fanerena varingarina amin'ny 4.0MPa, Afaka ny ho mety ho samy hafa habe dimeter (Ф16mm-Ф32mm) amin'ny alalan'ny fanovana clamping maty. Ny tena zana-tsipìka voalambolambo inverter entin'ny maotera amin'ny malefaka-notapahiny, ary miodina ny hafainganam-pandeha no ahitsy amin'ny alalan'ny maso amin'ny tontonana miasa.
1.4 Ny fitaovana kofehy tokana no kofehy kodiarana famolavolana. Ary ny kofehy vita amin'ny kodiarana no fitaovana avo lenta miaraka amin'ny aina tsy mihoatra noho 50000 fotoana, lava ihany koa ny fiainana amin'ny alalan'ny indray Nikosokosoka sy ny hafanana-fitsaboana.
1.5 Misy toerana telo fitaovana On X mpiray toy ny kofehy kodiarana, trimming vary sy ID lathing lelan. Ny asa dia niova toerana tsirairay ho fihenan'ny Tube farany, hifarana trimming sy ID chamfering.
1.6 Fitaovana amin'ny tsindry-Adjustable fitsofana rivotra rafitra, sy ny asa sy ny faharetan'ny fotoana azo nodorany tamin'ny tontonana fanaraha-maso, hanadio ny taom-piotazam Chip sy hihena fantsona nandritra ny asa.
1.7 Automatic lubrication rafitra ho oiling 10ml boky isan-30min. Ny solika tanky dia manana fahafahana ho an'ny 100 ora miasa amin'ny famenoana tanteraka ny toe-.
1.8 Fitaovana roa mpiray CNC-maso, 8" LCD Monitor, 500 tarika fandaharana, mandeha ho azy Foundation, vao hita system, voafetra rafitra fanairana
Single kodia kofehy / mikoriana mamorona
fihenan'ny + hifarana trimming ID chamfering
Copper Tube / Stainless vy Tube
Tube Wall hateviny hateviny
Min.Φ8.1 (rehefa savaivony Φ32 X T1.2 )
Main Shaft miodina Speed
0~2500R / min, Stepless fanitsiana
Axe X tapaka lalan-dra
Axe X Sspeed
Axe X Tolerance
Y Axe tapaka lalan-dra
Y Axe Speed
Y Axe Tolerance
Fahan'ny Air Pressure
Fanamarihana: Min. tsindry 0.5Mpa tokony antoka.
hydraulic varingarina + malefaka clamp
≤28 S tsirairay(,Φ32*t1.0→ID8.1
2300×1500×1500MG (L X W X H)
X / Y Axe Servo Motor
X / Y Axe Ball Mitondra Sokiro
X / Y Axe Linear Rail
tsirairay 2 tsiroaroa
Mitondra Ball Sokiro-jaza
tsirairay 2 pcs
Main Shaft mitondra (Front)
Main Shaft mitondra (aoriana)
Hollow Type miodina Varingarin'i
Pittsburgh Lock fiforonana Machine
Tube Ny fiforonana & fihenan'ny Machine
Pressure avo Polyurethane fanafody sombin-javatra Machine BDF-IX
Automatic Angle Steel Flange Manao Machine